> Resource > Lugood > Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka tirtiraa Lugood ee kaabta faylasha
Sida aynu soo kaban karto, farriimaha ka Lugood gurmad faylasha?
Marka ay timaado inuu ka soo kabsado fariimaha kaga imaanayo Lugood ah, habka ugu fudud ee waxaa si toos ah u soo celinta gurmad oo dhan si aad qalab macruufka ah. Sidaas, waxaad dib u heli kartaa dhammaan xogta aad u qalabka, oo ay ku jiraan farriimo. Shardi waa in aysan jirin xog muhiim ah oo ku saabsan qalab aad, si ay OK tahay in overwrite qalab aad by celinta gurmad ah.
Maxaa dhacaya haddii aadan ka dhigi kartaa a soo celiyo qalabka ama kaliya aad rabto in aad dib fariin ka helay gurmad ah, oo aan xog kale waxa ku jira oo keliya baa? Waa in aad bedesho sida: isticmaal Lugood gurmad shawladda. Iyada oo noocan oo kale ah qalab, Laydinka soo kartaa gurmad geli Lugood iyo u eegto faahfaahinta ku dhex jira. Markaas eegista soo kabsado wax kasta oo aad rabto in aad ka. Tani waa waxa aad rabto? Fadlan akhri oo ku saabsan in aad iska baarto in tallaabooyinka.
Xulo soo kabsado fariimaha qoraalka ah kaga imaanayo Lugood ah
Sida in gurmad Lugood ee shawladda, waxaad halkan u heli karaa talo, Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows) . Labada barnaamijyo ka caawin kara inay soo saaro Lugood oo dhan files gurmad (marka laga reebo kuwa Windows XP), oo ha idin ​​ku eegaan waxa ku jira fariimaha ka hor inta aadan soo kabsado iyaga. Waxaad buuxin kartaa shaqada oo dhan laba talaabo, ma xirfadaha iyo shuruudaha loo baahan yahay.
Si aad u soo kabsado fariimaha kaga imaanayo Lugood ah, uma baahnid inaad u baahan tahay in lagu xiro qalab si aad u computer ah. Just u abuurtaan ka dib markii aad dhammaysay rakibo. Markaas beddelaan si ay uga soo kabtaan Lugood ee kaabta File doorasho ee ugu sareeya ee suuqa kala aasaasiga ah. Ku dhawaad ​​waqti isku mid ah, oo aad arki doonaa in barnaamijka uu ka helay Lugood oo dhan files gurmad kombiyuutarka iyo iyaga soo bandhigay idinka soo hor jeedda. Dooro mid ka mid ah in aad rabto in aad soo saaro oo guji Start Scan .
Tallaabada 2. kabsado tirtiray fariimaha qoraalka ah kaga imaanayo Lugood ah
Skaanka la dhamaystiri doono in dhowr ilbiriqsi. Ka dib markii in, aad ku eegaan karaan dhamaan fariimaha helay gurmad Lugood faylasha, oo ay ku jiraan sawiro iyo videos. Dooro Messages dhinaca bidix ee barnaamijka iyo waxaad ka akhrisan kartaa waxyaabaha ku fariinta si faahfaahsan. Sax waxyaabaha aad rabto in aad guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.